Asa aman-draharaha Mampiroborobo ny “télétravail” ny Coronavirus
Mitombo ny tahotra manodidina ny fiparitahan'ny coronavirus ary miezaka ny hampifanaraka azy io ny tontolon'ny asa. Raha toa ka tafiakatra 17 ny isan` ireo olona voamarina fa mitondra tsimokaretina « coronavirus » eto Madagasikara, naka fepetra ireo orinasa sasany eto an-drenivohitra ka hampiharina ny tafiditra ao anatin` ny « télétravail ». Izany hoe, manao ny asa any an-trano fa alefa amin` ny alalan` ny aterineto ny asa.
Manazava izany ny lalàna mifehy ny asa ao amin` ny and. faha- L1222-11 ary manambara toy izao: “rehefa tojo tranga miavaka, indrindra raha misy valanaretina mifindra, na raha toa ka mahery setra dia azo raisina ho toy ny fandaharanasa ny “télétravail” izay hamela ny fitohizan' ny asan' ny orinasa sy hiantohana ny fiarovana ny ain` ny mpiasa”. Manana tombony tokoa isika eto Madagasikara satria isika no voalohany amin` ny hafainaganan` ny “téléchargement” eto Afrika ary laharana faha-22 maneran-tany. Raha ny fanadihadiana natao dia misy amin` ireo mpiasa no mahazo tombony kokoa amin` ity fomba fiasa ity.
Ho an` i Mamy R, izay misehatra amin` ireny call-center ireny “Tombony ho ahy ny zava-misy amin` izao satria efa aman-taonany aho no niasa nandray appel. Afaka miasa eto ambony fandriana (hehy) sady tsapako fa “productif” kokoa. Ny alatsinainy teo no nandray io fepetra io ny lehibenay. Mahavita mandamina ny asako faran` izay haingana aho satria tsy dia misy tsindry toy ny andavanandro”. Misy kosa ireo tsy dia mankasitraka ny fomba fiasa toa an` i Patricia R, izay misehatra ao amin` ny tontolon` ny serasera sy ny varotra “Ahoana moa no ahafahako miasa aty an-trano kanefa ny asanay dia tsy maintsy mifandray amin` ny mpanjifa mivantana? Tsy maintsy manenjika ny tanjona napetrak` ny orinasa (objectif de vente) anefa. Izaho rahateo reny dia ny ankizy ato an-trano ka somary mikorontana ambony ambany”. Ho an` i André, mpiasa birao, ihany koa dia tsy mankasitraka ny “télétravail”. Antony, hoy izy, tsy nanome fitaovana ny mpampiasa sady ny fahana na “credit” dia tsy ahitàna eny an-tsena. Ireo “cyber” rahateo dia mihidy kanefa ny hariva vao tena tototry ny asa. Ny iombonan` ireo mpiasa nanaovana fanadihadiana aloha dia tsy mitovy ny “ambiance de travail” sy any an-trano. Tsy misy ilay fifandraisana sy serasera mivantana fa tonga dia ianao sy ny solosaina an-tanana (laptop) sy ny aterineto kanefa io toy ny zava-mahadomelina. Marihana fa tany Frantsa, dia ny 16 martsa lasa teo no namoaka didy ny governemanta ao aminy fa mihatra ny “télétravail” noho ny fihanaky ny COVID-19.
Raha tsiahivina, ny taona 1993 no nanomboka ny fisian` io fomba fiasa “télétravail” io ary ny taona 1995 no nankatoavin` ny G7 mba hisorohana ny fandotoan` ny tontolo iainana. Raha ny fanadihadiana nataon` ny Polycom tamin` ny 2017, mamokatra kokoa ny 86%n` ireo mpiasa amin` ity fomba fiasa ity.